Fandaharana 6 hamoronana kapila fitifirana bootable ho an'ny Windows, Linux ary macOS 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ny programa amin'ny famoronana kapila flash bootable dia mitady ny hanamorana ny fanovana ny kapila USB ho kapila bootable. Ireo fitaovana ireo dia manolo bebe kokoa ny CD sy DVD, na ny fanarenana amin'ny rafitra tsy nahomby na ny fametrahana avy hatrany am-boalohany.
Ity lisitra manaraka ity dia manambatra ny rindrambaiko tsara indrindra ho an'ny fizarana Windows, macOS, ary Linux. Zahao hoe!
Hita amin'ny teny Pôrtogey, Rufus dia rakitra azo ampiharina izay tsy mila apetraka amin'ny PC-nao akory raha hampiasa azy. Ny fampiharana dia ahafahanao manao tselatra fandefasana bootable hamoronana haino aman-jery fametrahana amin'ny rakitra ISO.
Azo atao koa ny manao fomba hanavaozana ny BIOS, ny firmware na ny programa amin'ny fiteny ambany. Ny rindrambaiko koa dia manana safidy hijerena ny flash drive amin'ny sehatry ny ratsy. Manome toky ireo mpandrindra fa ny rindrambaiko dia avo roa heny noho ny mpifaninana lehibe.
Rofosy (maimaim-poana): Windows | Linux
Universal USB Installer dia misongadina amin'ny fahatsoran'ny fampiasana azy. Safidio fotsiny ny rafitra miasa, ny fisie ISO ary ny tsora-kazo USB. Avy eo mankanesa any mamorona sy ny sisa. Ny programa dia azo ampiasaina tsy ho an'ny fametrahana rafitra ihany, fa koa ho fanarenana fanarenana, fiarovana.
Ny rindrambaiko dia mamela anao hamorona fitaovana boot miaraka amin'ny fitehirizana maharitra amin'ny fizarana Linux sasany. Ny endri-javatra dia manome anao fidirana amin'ny fikirakirana ny rafitra sy ny famerenana rakitra.
Raha hampiasa azy io amin'ny kinova Windows, ny pendrive dia tsy maintsy apetraka ho NTFS ary manana toerana malalaka 20 GB. Amin'ny tranga hafa dia azo apetraka ho Fat16 na Fat32 ihany koa ilay fitaovana.
Universal USB Installer (maimaim-poana): Windows | Linux
Avy amin'ilay mpamorona mitovy amin'ny Universal USB Installer, YUMI dia misongadina amin'ny maha installer multiboot azy. Inona ny dikan'izany? Izany dia ahafahanao mametraka rafitra fiasa marobe, firmware, mitahiry antivirus sy fakantsary antivirus, ankoatry ny loharano hafa, amin'ny pirinty iray ihany.
Ny hany sakana dia ny fahafahan'ny fitaovana mandray ireo rehetra ireo. Ny rindranasa dia manolotra ihany koa ny mety hamoronana pendrive miaraka amin'ny fitahirizana maharitra. Raha hampiasa azy io dia tsy maintsy apetraka amin'ny Fat16, Fat32, na NTFS.
Yumi (maimaim-poana): Windows | Linux | Mac OS
4. Fitaovana USB / DVD Windows
Ny Windows USB / DVD Tool dia fitaovana ofisialin'i Microsoft amin'ny famoronana flash drive bootable hametrahana Windows 7 na 8. Ny programa dia mamela anao hanao kopian'ny fisie ISO, izay mampivondrona ireo singa fametrahana Windows rehetra.
Mora ampiasaina, ampidiro ao anaty port USB fotsiny ny drive media, safidio ny ISO ary kitiho Mandrosoa. Araho fotsiny ny torolalana. Raha tsy mitady fampiasa fanampiny na safidy fanaingoana amin'ny boot drive ianao, dia mety ity no fampiharana ho anao.
Fitaovana USB / DVD Windows (maimaim-poana): Windows 7 sy 8
Etcher dia misongadina amin'ny fanamorana ny fampiasana azy, na dia mifanentana amin'ireo rafitra samihafa aza izy. Amin'ny tsindry vitsivitsy monja dia ahafahanao mamadika flash drive ho haino aman-jery bootable, na ho an'ny fizarana Windows, macOS, na Linux. Safidy tsara ho an'ny olona tsy manana traikefa kely amin'ny sehatra io.
Etcher (maimaim-poana, nefa koa misy kinova aloa): Windows | macOS | Linux
WinSetupFromUSB dia mamela anao hamorona flash drive multi-boot miaraka amin'ny kinova Windows, manomboka amin'ny XP ka hatrany amin'ny Windows 10. Na dia mifantoka amin'ny rafitra Microsoft aza ny anarana, dia mifanaraka ihany koa amin'ny programa Linux sasany ny programa.
Ho fanampin'izany, manome ny safidy hanohana ireo kapila rindrambaiko ianao, toy ny antivirus, ary kapila fanarenana avy amin'ireo mpamokatra samihafa. Na dia be dia be aza ny asany dia miavaka amin'ny fisian'ny interface interface intuitive sy mora ampiasaina.
WinSetupFromUSB (maimaim-poana): Windows | Linux
Inona no atao hoe flash drive bootable?
Talohan'izay dia mahazatra ny mampiasa CD, DVD-ROM, ary na dia ireo disk floppy aza ho toy ny haino aman-jery bootable. Satria maro amin'ireo solosaina ankehitriny no tsy manohana intsony ireo haino aman-jery ireo, ny USB flash drive sy ny karatra SD dia nahazo toerana malalaka misy mpisolo toerana.
Ankoatra ny fitaterana mora kokoa, ny pendrive dia haingana kokoa ihany koa. Amin'ny fanaovana azy ho bootable, azonao atao ny mampiasa azy ho toy ny installer OS ivelany. Ny programa fametrahana ao amin'ny kapila boot dia mifehy tanteraka ny PC ary afaka manoratra ny rafitra efa misy na mametraka vaovao avy amin'ny rangotra.
Ny fitaovana dia azo ampiasaina ho kapila fanarenana ihany koa, afaka mamaha ny tsy fahombiazan'ny rafitra. Amin'ity tranga ity dia ampiasaina ny kinova maivana be an'ny rafitra, saingy miaraka amin'ny familiana sy loharano ampy hamahana ny olana na farafaharatsiny afaka mamerina angon-drakitra ilaina.
Ny programa tsara indrindra handoroana CD, DVD ary Blu-Ray
Ahoana ny fomba fampidinana sy fametrahana an'i Google Chrome ivelan'ny Internet
Ny antivirus tsara indrindra maimaimpoana amin'ny PC